माडीको मतपत्र कस्तो होला, के के होला? | Hamro Madi
माडीको मतपत्र कस्तो होला, के के होला?
प्रकाशित मिति: ०९ बैशाख, २०७४
निर्वाचन आयोगले नमुना मतपत्रमा सार्वजनिक गरिसकेको छ । नमुना मतपत्रमा चकलेटदेखि सियो सम्मका वस्तुहरुको फोटो चुनाव चिन्हका रुपमा राखिएको छ । दलहरुले आफै निर्माण गरेको चुनाव चिन्ह छ भने स्वतन्त्र रुपमा उमेद्वार दिने उमेद्वारका लागि ती चुनाव चिन्ह राखिएको छ ।
आयोगले कोट, जुत्ता, फर्सी पनि चुनाव चिन्हमा राखेको छ । साडी पिन समेत चुनाव चिह्नका रुपमा रहेको छ । फुलगोभी, भ्यागुतो, क्यालकुलेटर, जादो, दाह्री काट्ने मेसिन समेत चुनाव चिन्हका रुपमा आएका छन् ।
लसुन, प्याज, चिया छान्ने भाडो, गुन्द्री, चक्कु, बुट, पिङ, व्याट्री, पानीको ड्रम समेच चुनाव चिन्ह रहेका छन् । आयोगले राखेका चुनाव चिन्हहरु साधारण व्यक्तिले समेत चिन्न सक्नेछ । भान्सामा प्रयोग हुने धेरै वस्तुहरुको चिन्ह कायम गर्नुको कारण हो, सबैलाई चिन्न सजिलो होस् ।
निर्वाचन आयोगले ७५ जिल्लामा प्रयोग हुने मतपत्रको नमूना सार्वजनिक गरेको हो। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने २७ दलको चुनाव चिह्‍न यथावत छ। ती बाहेक अन्य दलले स्वतन्त्रको हैसियतमा चुनाव चिह्‍न पाउनेछन्।
संसदका रहेका २७ दलले आफ्नो चुनाव चिह्‍न अनुसार मत माग्ने काम सुरु गरिसेकेका छन्। ती बाहेक अन्य दलले चुनाव चिह्‍न नपाउँदा भोट माग्ने काम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सकेका छैनन्।
स्वतन्त्र दललाई दिने चुनाव चिह्‍नलाई निर्वाचन आयोगले ‘क’ देखि ‘च’ सम्म वर्गीकरण गरी ती मध्ये एउटा चुनाव चिह्‍न वैशाख १६ गते उम्मेदवारी मनोनयनका क्रममा उपलब्ध गराउनेछ।
‘संसदमा रहेका बाहेकका दललाई आयोगले उम्मेदवारी मनोनयनका दिन निर्वाचन चिह्‍न उपलब्ध गराउँछ,’ आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले भने। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका मध्ये संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने २७ दलबाहेक अन्यले स्वतन्त्र दलको हैसियतमा निर्वाचन चिह्‍न प्राप्त गर्नेछन्।
चितवनको माडीमा हुने मतपत्रको लागि निर्वाचन आयोगले दिएको नमुना मतपत्रको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस
माडीको धार्मिक एवम् पर्यटकीय क्षेत्रहरुको उचित प्रचारप्रसार र विकासको ओझेलमा
निर्वाचनको मिति सर्यो, दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठ ३१ मा हुने, कुन प्रदेशमा कहिले ?
१३ भदौ, २०७५
कर्मचारीतन्त्रमा रहेको मिलेमतो तोड्नुपर्छ ः दाहाल
समृद्धिको मार्गप्रशस्त गर्न साना उद्योगको भूमिका महत्वपूर्ण– राज्यमन्त्री बाँस्कोटा
३० चैत, २०७४
माओवादी केन्द्रका एक कार्यकर्ताको अपहरण
२९ चैत, २०७४
@HamroMadi3months ago Follow
@HamroMadi7months ago Follow